निषेधाज्ञामा एमालेको चुनावी प्रचार तिब्र, दुई नम्बर प्रदेशमा व्यापक चुनावी कार्यक्रम, प्रहरी रमिते - CNN EXPRESS
निषेधाज्ञामा एमालेको चुनावी प्रचार तिब्र, दुई नम्बर प्रदेशमा व्यापक चुनावी कार्यक्रम, प्रहरी रमिते
जेठ २०, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेको बेला सत्तारुद दल नेकपा एमालेले भने आफ्नो चुनावी प्रचारलाई तिब्रता दिएको छ । नेकपा एमालेले लकडाउन अवधिमा विशेष गरी २ नं. प्रदेशलाई ध्यान दिएर चुनावी कार्यक्रम गरेको हो ।
निषेधाज्ञाकै अवधिमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेताले २ नं. प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको ग्रामीण भेगमा चुनावको तयारी भन्दै कार्यकर्ता भेला र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेका हुन।
पर्साका एमाले नेता एवम् पूर्वसांसद राजकुमार गुप्ताले निषेधाज्ञाको समयमा आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावको तयारी भन्दै कार्यकर्ता भेला र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्दै आएका हुन्। एमाले नेता गुप्ताले जेठ १७ गते पोखरीया, औरही, सन्ठी, बहुअर्वामा कार्यकर्ता भेला गरेका थिए। जेठ १८ गते पनि नेता गुप्ताले पोखरीया नगरपालिका ९ शीवबर्वामा कार्यकर्ता भेलाका साथै पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेका थिए। नेता गुप्ताले निषेधाज्ञामा चुनावको प्रचार गर्दै राजनीतिक कार्यक्रम गरेको तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएका छन्।
नेविसंघ पर्साका नेता विकास तिवारीले कार्यक्रमको तस्बिर सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै तिवारीले,‘निषेधाज्ञामा नेतालाई चुनावी कार्यक्रम गर्न सरकारले के छुट दिएको हो रु के नियम कानुन सर्वसाधरण जनतालाई मात्र लाग्ने होरु’ भनेर पोष्ट गरेपछि एमालेको चुनावी प्रचारको पर्दाफास भएको हो । निषेधाज्ञाको समयमा सत्तारुढ दलका नेताले कार्यक्रम गर्दा प्रशासन भने मुकदर्शक बनेको छ।
Previous: तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुनेगरी भएको हत्याकाण्डको २० वर्ष पूरा, घटना अझै रहस्यमय
Next: युवा क्रान्तीको अपरिहार्यता